Malezia: Vehivavy 3 nokapohina fa nanao firaisana tsy ara-dalàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Marsa 2010 8:49 GMT
Vehivavy tsy manambady telo, 17-25 taona, no nomasahina tamin'ny volana lasa noho ny didy navoakan'ny fitsarana Shariah tao Kuala Lumpur, Malezia rehefa voaheloka ho “nanao firaisana ivelan'ny mariazy.” Ireo no vehivavy voalohany voakapoka noho ny nandikan'izy ireo ny voararan'ny Shariah.
13 ny isan'ireo nanatri-maso ny fikapohan'ny mpiandraikitra ny fonjan'i Kajan ny fitombenan'ireo vehivavy tamin'ny tsorakazo. Voakapoka in'enina ny roa amin'izy telo raha in'efatra kosa ny fahatelo.
Taorian'ny fikapohana dia nilaza izy telo mirahavavy fa azony ny dikan'ny fanasaziana ka nivoady izy ireo fa hibebaka. Efa hanambady ny sipany avy ihany koa moa ny roa amin'izy telo.
Nanadrohadro ny hanokafana ny ‘ranomafanan'ny fikapohana’ i Rantings by MM
Ataon'izy ireo tahaka ny mankany amin'ny Ranomafana izy izany. Azafady anie, mba takatr'izy ireo ve hoe tahaka ny ahoana moa izany fikapohana ampahibemaso izany? Mahazo fampianarana maimai-poana ny fikapohana mitovy amin'ireny ve ry zareo any am-ponja?
Saingy rehefa nosaziana izy ireo dia jereo, lasa miozolomana maodely ankehitriny.
Koa raha mora tahaka izany ny fanaovana ny olona ho lasa miozolomana tsara, dia manokatra ‘ranomafanan'ny fikapohana’ maromaro fotsiny izany no ataon'ny fitondrana mba ahafahan'ny olona mankany indray maka aorian'ny fandoavana RM1000 na ny mitovitovy amin'izany dia mivoaka ao lasa olo-masina avy eo (olona mitondra sari-volana mifanandrify amin'ny lohany ahafantarana ny olo-masina amin'ny sary katolika). Tahaka ireo toerana fialana amin'ny fiankinana @ zava-mahadomelina.
Misalasala ihany i Raymond Yeow rehefa nilazana fa tsy misy dian-kapoka hita tamin'ny tenan'ireo vehivavy avy eo
Mampiahiahy ihany ny nikapohana ireo vehivavy ireo sy ny fanamarinan'ny mpanao politika avy hatrany avy eo. Tsy hita ny dian-kapoka? Ao tsara sady masina taorian'ny fikapohana? Mba ratsy fiafara loatra izany tantara izany.
jelas.info moa nanontany raha kapohina koa ny mpanao politika raha manao firaisana tsy mifanaraka amin'ny lalàna
…Azontsika antenaina ve fa hokapohina avokoa izay miozolomana rehetra tratra manao firaisana ivelan'ny fanambadiana (na andeha ataoko hoe tratra manao izany ihany koa ny mpikapoka)?
Fa raha amin'izay fotoana izay, eken'ny saintsika ve izany fa tsy nisy nanao firaisana ivelan'ny tokantranony ( na hoe tratra nanao izany) ireo mpanao politika na mpitarika antsika ireo satria tsy hita voakapoka tamin'izany izy ireo aloha?
Mitaky ny hampiharana ny lalàna Shariah hiadiana amin'ny mpangalatra sy ny mpamono olona i Billy
Tsy misy afa-tsy fitaka bevava ity resaka fikapohana ity. Raha tena matotra amin'ny hampiharana ny lalàna Shariah ny UMNO (antoko mitodra ny firenena) maninona no mitsahatra hatreo amin'ny fikapohana ihany ny resaka. Azo ampiharina avokoa ny voalaza rehetra ao toy ny fanapahana ny ratsam-batana noho ny fanaovana kolikoly na halatra, sy fanapahan-doha ampahibemaso noho ny vono olona natao. Ka ahoana moa no ahafahan-dry zareo mifantina sy mifidy izay hampiharina?
Mamelabelatra ity resaka fikapohana ity hitarika henatra ho an'i Malezia eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena i Lim Kit Siang
Hitaraka resabe tsy hanatsara ny endrik'i Malezia sy hanimba ny fahafahany mifaninana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tao anatin'ny folo volana nahavoafidy an'i Datuk Seri Najib Razak ho praiminisitr'i Malezia indray iny fikapohana vehivavy telo heverina fa nanao firaisana tsy anaty tokantrano iny.
Tsy mety amin'ny Malezia ny hitodihan'ny iraisam-pirenena aminy noho ny lazaratsy nefa isika mitady ny fitokisan'ny eto anivon'ny firenena sy ny iraisam-pirenena amin'ny fahaiza-mitondra; ny fampiharana ny lalàna; firenena maoderina sy maodely eo amin'ny sehatra demaokratika, fampandrosoana, maro foko, maro kolontsaina ary maro antokom-pivavahana toerana nofinofisana handehanan'ny FDI, paradisan'ny mpizahantany ary toeram-pilanonan'ny mpianatra iraisam-pirenena.
Kivy ny The Malaysian raha ampiharina amina firenena lahika tahaka an'i Malezia izany fikapohana izany:
Arahabaina ny Umno, arahabaina i Malezia, fa tratranareo ihany ny tanjona izay nokarohinareo hatry ny ela avy amin'ny arhalahinareo Islamika ary nanokatra rejisitra fametrahana fitoriana amin'ny fanaovana izany— mampihatra izay voasoratra ao amin'ny syariah amin'ny fikapohana ny vehivavy amin'ny firenena manana Lalampanorenana lahika.
Manentana ny tsy miozolomana i Mahaguru58 hikôpy ny lalàna Silamo aloha vao miady hevitra ny amin'izy ity
Tsy hitako izay idiran'ireo tsy miozolomana hidikiditra amin'ny tsy azy amin'ny fitenenana ity rehetra ity amin'ny raharahan'ireo voasazy noho ny tsy fanajana ny lalànan'ny finoany?
Tokony hianatra ny fahamarinany ao anatin'ny lalànan'ny Syariah an'ny Silamo aloha ny tsy miozolomana mialoha ny hisokafan'ny vavany hiresaka zavatra tsy ananany zo iadiany hevitra voalohany indrindra.
Ny resaka famoahana ny fikapohana nolazain'ny Syariah dia mifanarana amin'izay nodidian'ny Tsitoha Allah ho an'ireo manao fahotana lehibe toy ny fijangajangana, sodomia, sns?
Mino aho fa tonga ny fotoana ho an'ny mpamaham-bolongana tsy miozolomana hiezaka indroa heny noho ny teo hanazava ireo izay miteraka saritaka sy mampiahiahy ny namana Maleziana ny atao hoe marina raha jerena ny lalàna silamon'ny Syariah sy ny antony ampiharana izay toriana fa tsy sanatria tahaka ny hanao ny tsianjerin'ny boloky tsy mahalala afa-tsy teny vitsivitsy averimberina fa tsy mahasahy mampiasa ny finoany araka ny tokony ho izy!
09 Avrily 2021Azia Atsinanana
25 Marsa 2021Azia Atsinanana